Nepali Rajneeti | यी चिनियाँ सहकर्मीका कारण भयो बिल गेट्सको स’म्ब’न्ध’वि’च्छेद ?
यी चिनियाँ सहकर्मीका कारण भयो बिल गेट्सको स’म्ब’न्ध’वि’च्छेद ?
बैसाख २४, २०७८ शुक्रबार २१३ पटक हेरिएको
माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले हालै आफ्नो स’म्ब’न्धवि’च्छे’दको घोषणा गरेका छन् । हालसम्म यो बहुचर्चित स’म्ब’न्ध’वि’च्छे’दको कारण खुल्न सकेको छैन तर यसैबीच एक महिलाको नाम सार्वजनिक भएको छ । खबरलाई विश्वास गर्ने हो भने यही महिलाका कारण बिल र मेलिन्डाको स’म्ब’न्ध’वि’च्छे’द भएको हो ।
थुप्रै अनलाइन अफवाहका अनुसार बिल र चिनियाँ महिला ज्हे शेली वाङ्गको अफेयर चलिरहेको थियो । यद्यपि, यी अफवाह बढेपछि वाङ्ग आफैं सार्वजनिक भइन् र उनले चीनको लोकप्रिय सोसल मिडिया वेबोमा आफ्नो पक्ष राख्दै यी अफ’वाहको ख’ण्ड’न गरिन् ।
वाङ्गले चीनको मन्दारिन भाषामा लेखेकी छिन्, ‘मलाई लागेको थियो यो अ’फ’वाह आफसे आफ समाप्त हुनेछ किनभने यो अ’फवाह आधा’र’ही’न छ तर मलाई थाहा थिएन कि यो यति धेरै बढ्दै जानेछ । म ती सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई यो मुश्किल समयमा साथ दिनुभयो र यी अ’फ’वा’ह समाप्त गर्न मेरो मद्दत गरे ।’
स्मरण रहोस्, ज्हे शे’ली वाङ्ग ३५ वर्षकी छिन् र उनी चीनबाट अमेरिका आएकी थिइन् । उनी हाल सिएटल शहरमा बसिरहेकी छिन् र अ’वि’वा’हित छिन् । उनी एक व्यावसायिक ट्रान्सलेटर हुन् र उनले गेट्स फाउन्डेशनबाहेक येल स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट र हार्वर्ड बिजनेस स्कूलका लागि पनि काम गरिसकेकी छिन् ।
वाङ्गकी साथी लीले यसबारे एक ब्लग पोस्ट पनि लेखेकी छिन् । उनले वाङ्ग आफ्नो पुरानो सहकर्मी भएको छ र उनीबाट आफूले धेरै प्रेरणा पनि पाएको बताएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म कहिल्यै वि’श्वास गर्न सक्दिनँ कि उनले अरुको वै’वा’हिक जीवनमा द’ख’ल दिने कोसिस गर्न सक्छिन् ।’
यो मामिलामा वाङ्गकी साथी लीले वाङ्ग निकै म’ह’त्वा’कां’क्षी भएको पनि बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘उनी विभिन्न काम गर्नका लागि आफूलाई निकै प्रोत्साहन गर्छिन् । उनले दुई वर्ष अघि पाइलटको लाइसेन्स पनि पाएकी थिइन् र उनले पाइलटको तालिम पनि पूरा गरिसकेकी छिन् ।’
स्मरण रहोस्, बिल गेट्सको स’म्ब’न्ध’वि’च्छे’दको घोषणाका साथै टाइम म्यागजिनको एक आर्टिकल भाइरल हुन थालेको थियो र यसका कारण उनको नीजि जीवनबारे चर्चा हुन थालेको थियो । यो आर्टिकलमा लेखिए अनुसार बिल गेट्सको आफ्नी श्री’म’तीसँग एक अचम्मको सम्झौता थियो ।
उक्त सम्झौता अनुसार बिल गेट्स हरेक वर्ष आफ्नी पूर्व प्रेमिका ए विनब्लेडलाई भेट्नका लागि एक सिक्रेट बीचहाउस जाने गर्दथे । न्यूयोर्क पोस्टले हालै यस सि’क्रे’ट बी’च’हाउ’सको तस्बिर जारी गरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार यो बी’च’हा’उस एनको हो र यो ठाउँ मानिसहरुबीच निकै लोकप्रिय छ । रातोपाटी